भरतपुर विवादको मुद्दा आज सर्वोच्चले नहेर्ने - Everest Dainik - News from Nepal
भरतपुर विवादको मुद्दा आज सर्वोच्चले नहेर्ने
काठमाडौ, असार २३ । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा भएको विवादलाई आज सर्वोच्चन अदालतमा बहस हुने बहस हुने गरी पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ भएपछि स्थगित भएको छ। अर्को सुनुवाई असार २६ गते सोमबार तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलास यो मुद्दाको लागि तोकिएको थियो। यो मुद्दाको पेशी सातौँ नम्बरमा राखिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस प्रेरणालाई दिएको जग्गा सरकारको भएको सर्वोच्चको फैसला
असार ६ गते च्यातिएका मतपत्रको पोकासहितका कागजातहरु मगाइएपछि यो मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न नभ्याएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि जेठ २८ र जेठ ३० मा पनि दुई पटक पेशी चढे पनि मुद्दा हेर्न भ्याइएको थिएन ।
अदालतको आदेश अनुसार वडा नं. १९ मा च्यातिएका ९० थान मतपत्रसँगै जिल्ला अदालत चितवनमा मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध अदालतमा चलाइएको मुद्दाको मिसिल, घटनापछिको प्रहरी सञ्चारको प्रतिलिपी, मतगणना स्थगित गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको निर्णय र पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल पनि अदालतमा आज पेस हुँदै थियो ।
याे पनि पढ्नुस आज के होला सर्वोच्च अदालतमा ! इजलास तोक्न होडबाजी
च्यातिएका मतपत्र लगायतका प्रमाण सुरक्षाकर्मीको रोहबरमा चितवनबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो।
जेठ १४ गते मध्यरातमा मतगणना जारी रहेको बेला माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि मतगणना स्थगित छ।
मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको निर्णय गरेको थियो । पुनः मतदान निर्णयविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस किन सर्यो लोकमान विरुद्ध मुद्धाको सुनुवाई ?
ट्याग्स: Bharatpur matpatra, suprim court